Yemhando Kudzora - CHANGZHOU DEDGE DECORATIVE MATERIAL CO., LTD
PASI PRODUCT UNHU
Sehunyanzvi wekumira-mutengesi wepafloor nemadziro emadziro, kudzora kwemhando yepamusoro kwakakosha mukusimudzira kwekambani. Naizvozvo, isu tine yakazara kuongororwa neiyo yemhando yekuongorora dhipatimendi uye yakasarudzika yekutariswa neyechitatu-bato yemhando muongorori mukuita kwekugadzira pasi.
Tora SPC pasi semuenzaniso. Muchikamu chekutanga che extrusion, yega yega 10-30 maminetsi, dhipatimendi rekuongorora mhando rinoongorora saizi, kukwenya kwepasirese, uye fomula yeiyo semi-apedza chigadzirwa.
Nhanho yechipiri ndeye kuyedza kubwinya kweiyo spc pasi. Nekuti misika yakasiyana ine zvido zvakasiyana zvepasi gloss yepasi spc, isu tinoshandisa fotometa kuyedza batch yega yega uye tichiienzanisa nezvinodiwa nechibvumirano.
Nhanho yechitatu inoona saizi nekureba musiyano wepasi. Tichifunga nezve chokwadi chekuti vatengi vazhinji vakatenga pasi pamberi, isu tinofanirwa kuenzanisa saizi isati yasvika saizi, kuti mabatch maviri enhumbi aungane pasina matambudziko.
Kechipiri, seimwe yeakanakisa kuongororwa, muyedzo musiyano wekuyera, ichi chikamu chakakosha kwazvo chekuongorora kwepasi, icho chinokanganisa zvakananga chimiro chechinhu uye zvakare chinoshoropodza kana mutengesi ari nyanzvi.
MASVINGO UNHU CHIDZIDZO
Kazhinji, WALL rakakamurwa kuva epanze uye ekunze madziro emadziro. Iyo madziro pani inotaridzika yakapusa, asi haisi nyore kwazvo kusarudza. Kuti usarudze yemhando yepamusoro uye yakachipa pamadziro epaneru, iwe kutanga unofanirwa kuziva maitiro ekutarisa mhando. Seunyanzvi hwedhiribhodhi mugadziri, isu tinoongorora ese maficha ekugadzira kuve nechokwadi cheyakagadzika mhando yemadziro edu.
Chekutanga pane zvese, iwo ruvara, nekuti iwo madziro mapaneru akagadzirwa epurasitiki kara firimu, izvo zvinoita kuti yega yega batch yemavara iwedzere kana zvishoma kusiana muvara. Kuti tidzivise hombe misiyano, isu tinosiya masampuli ekuenzanisa mune yega yega batch.
Kechipiri, saizi kuona, nekuti saizi dzakasiyana dzinoshandisa huwandu hwakawanda hwezvigadzirwa, zvinokanganisa zvakananga mutengo wemadziro emadziro. Uye iyo yakakura saizi, iyo yakakura gobvu, iyo yakasimba iyo madziro paniji ichave iri
Wobva waisa uye kuyedza, iyo pani yemadziro ndeye yekumisikidza yekukiya, inofanirwa kuve yakaunganidzwa uye kuyedzwa usati wabva kufekitori kuti uone kuti iro remadziro pani rakagamuchirwa nemutengi rinotamba. Vatengi vazhinji vekunze vanofarira kuzvitenga nekuzviisa vega. Kuongorora kwefekitori kwakakosha kwazvo.
Yekupedzisira ndeye yemukati mhando yekuongorora kwemadziro emadziro, ayo asina moto, isapinda mvura, uye UV nemishonga. Iva nechokwadi chekushandisa kwenguva refu uye kwakachengeteka kwemadziro emadziro